linksys router configuraion ဘယ်လိုချလဲသိခြင်လိုပါ — MYSTERY ZILLION
linksys router configuraion ဘယ်လိုချလဲသိခြင်လိုပါ
May 2009 edited September 2009 in Idea
Mz မှအကိုတိုအမတိုရေ ကျွန်တော်ဆိုင်မှာ bagan adsl နဲ wimax နှစ်လိုင်ရှိတယ် အေတာကို linksys router နဲ connection နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီ server ထိုင်ခြင်းလို linksys ကိုဘယ်လို configuration လုပ်လဲဆိုတာပြောပြပေပါလာခင်ဗျာ။:((
RV042, RV082 ၂ မျိုးရှိတယ်ဗျ. lan4port နဲ့ 8 port ပါတာပဲ ကွာတယ်။ configuration ကတော့ ထွေထွေ ထူးထူး သိပ်လုပ်စရာမလိုပါဘူး။
၁. linksys router ထဲကို Login ၀င်လိုက်ပါ။
၂. Setup ကို နှိပ်ပါ ။ WAN1,WAN2 ကိုသတ်မှတ်ပေးပါ (ဥပမာ WAN1 ကို bagan ADSL ထားမယ်ဆိုရင် Static IP ရွေးပြီး IP များကို မှန်ကန်အောင်ထည့်ပါ) Save Settings နှိပ်ပါ။
၃. System Management ထဲသွား၍ ၂ လိုင်းပေါင်းလိုလျှင် load balance ကို ရွေးပါ။
၄. Bandwidth နေရာတွေ မိမိရယူထားသော bandwidth ကို upstream,downstream တန်ဖိုးများ မှန်ကန်စွာ ရိုက်ထည့်ပါ။ (အရေးကြီးပါသည်။ bandwidth value များလွဲမှားပါက အင်တာနက် လိုင်း ၂လို်င်း၏ load factor များကြောင့် နဂိုထက် ပိုနှေးသွားနိုင်ပါသည်။ )
ဒီလိုပါ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာ server မထိုင်ထားပါဘူး။ router နဲ့ပဲသုံးပါတယ်။
router က cache နည်း တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဗျ:((:((:77::63:
Bandwidth ကို Upstream,Downstream တန်ဖိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာ..
ပြီတော့ RedLink Wimax 256 & MPT ADSL 1 Mbps
ကို Linksys RV042 Router
I think it is like that below:
For example, MPTADSL1 Mbps,
Upstream is 1 Mbps and Downstream is usually half of the upstream.
You can use http://www.speedtest.net to measure your speeds.